Uunana socod Northern Italy By tareenka | Save A tareenka
Home > Tareen Safar Talyaani > Uunana socod Northern Italy By tareenka
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 11/02/2020)
Italy is one of the most popular countries in Europe to visit because of the variety of meelaha gudahood ay xuduudaha. Northern Italy waa kulkulul League ah marka ay timaado dhaqanka Talyaani, iyadoo si ka badan dadka u safraya si ay u arkaan iyo samayn. Haddii sampling khamri aad u wanaagsan oo qadeysaa on cunnada-heer caalami ah ama sahaminta qadiimiga ah Daar wayn iyo kaniisadaha, this gobolka dalabyo waayo-aragnimada gaarka ah in aad jeclaan doonaa. Waxaa jira badan oo meelaha si ay u sahamiyaan in Northern Italy, sidaa darteed haddii aad leedahay a toddobaadkii ama laba si ay ugu bixinwaydeen Italy, aad loo xidho si aad u hesho meelaha qaar ka mid ah si aad u captivate. Halkan waxaa ku qoran dhowr soo jeedin ah meelaha ay soo booqdaan markii uunana socod Northern Italy tareen.
Ku bilow booqashadaada Northern Italy ee Milan, caasimada fashion dunida ah. magaaladana waxaa ka buuxa ee cajiibka Renaissance naqshadaha, cathedrals cajiib ah oo camal-heer caalami ah tahay. Visitors sidoo kale qaadan kartaa safar maalin ah harooyinka Talyaani iyo Koonfurta Alps gobolka ka this heer sare iyo nawaaxigeeda. Milan ayaa sidoo kale hoy u tahay Milan Dhexe, oo waxaa loo arkaa inay mid ka mid ah Yurub ugu quruxda badan tareenada. Tanu waa meesha ugu fiican si ay u bilaabaan aad safar of Northern Italy.
La Spezia in Tareenadu Milan
Parma in ay Tareenadu Milan
safarka tareenka ka soo Milan in Venice waa saacadaha caadi ahaan laba iyo badh, with plenty of tareen muuqaal safra u bogi karaa daaqadda qaadee. Laga soo bilaabo marka aad ka baxdo saldhigga tareen in Venice ah, waxaad qaadi kartaa bidhaamaysa Grand ee Canal weyn, halkaas oo nooc kasta oo watercraft loo arki karaa aadeen by. Venice wuxuu ka kooban yahay 118 jasiiradaha ku xiran by buundooyinka iyo kala kanaalada. magaaladan weyn waa caan quruxdiisa, waayo,, naqshadaha, arts iyo jidadka ka samysan. Socotada ma caawin kartaa, laakiin ku dhici jacayl leh gobolka this sixray. Uunana socod Northern Italy tareen ma aha dhamaystiran oo aan booqasho uu ku Venice.
Genoa si ay Tareenadu Venice
Turin si Tareenadu Venice
Parma in ay Tareenadu Venice
La Spezia in Tareenadu Venice
Florence, magaalada hormariyo caan, waxa uu ku yaalaa kaliya saddex saacadood tareen ka Venice. Marka aad gaarto caga this, kasta site waaweyn waa masaafad ka saldhiga tareenka. Sida ee xarunta gobolka Tuscany ee, Florence faanaa cuntada la yaab leh oo khamri, oo ay la socdaan matxafyada-heer caalami ah. Booqo indhaha halyeey, oo ay ku jiraan socod Ponte Vecchio sidoo kale loo yaqaan 'Old Bridge', Dhuur Duomo Florence iyo Michelangelo ee farshaxan Daa'uud.
Reggio Emilia in Tareenadu Florence
Cinque Terra – Uunana socod Northern Italy By tareenka
Samee Cinque Terra stop kama dambaysta – gobolka this cajiib ah waa dhowr saacadood oo kaliya tareen ka Florence. Cinque Terra laha matxafyada ama caan ah taariikhi goobaha laakiin waa qaybta weerarka ah ee Faransiiska ah Talyaani loo reebay in ay Sucuudiga. maalmood ee uunana socod Northern ka dib markii Italy tareen, tani waa meel ku fiican in ay ku raaxeystaan ​​Italy ee dabiiciga ah muuqaalka. xeebta buur ah waa isku dar ah ee qarar ayaa dhagaxayga weyn iyo canab ah soo jiidasho leh shan qurux badan oo fog tuulooyinka kalluumaysiga.
Reggio Emilia in Tareenadu Levanto
Genoa si ay Tareenadu Levanto
Sestri Levante in Tareenadu Levanto
Parma in ay Tareenadu Levanto
magaalooyinka ku xiran yihiin oo kaliya by doon, Waddooyinkiisa tug iyo khadadka tareenada Dabcan. Baadh qarar iyo xeebaha iyo dib u shidaal qaadasho at mid ka mid ah kafateeriyada qurux badan Shaad on headlands dhagax Cafiyi dekedda. Gobolka Tani idyllic waa si dhab ah neefta-qaadashada – meel ku fiican in dib-u-firfircooni. Laga soo bilaabo halkan aad qaadi karto tareen back to Milan halkaas oo aad ka bilaabi kartaa gurigaaga safarka.
Ma booqan Northern Italy tareen? Let us know the favorite places that you have visited by tweeting us at @SaveATrain! waxaan sidoo kale way firfircoon yihiin dhammaan channels bulshada, baadhid Saveatrain
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftouring-northern-italy-by-train%2F%3Flang%3Dso – (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#cinqueterra Italy milan northitaly travelflorence travelitaly travelvenice
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka Danmark, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareenka Safarka ee Hungary, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Luxembourg, Tareenka Safarka Switzerland, Tareen Travel The Netherlands, safarka Europe
Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Isbaanishka, Tilmaamaha Tareenka Safarka, Tareenka Safarka Turkiga, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe